नेपालको ओमान भ्रमणमा देखिएका पाँच कमजोरी | Hamro Khelkud
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली क्रिकेट टोली ओमान भ्रमणमा आइसिसी विश्वकप लिग–२ ओडिआई त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर मंगलबार स्वदेश फर्किसकेको छ । ओमान भ्रमणमा कुल ६ खेल खेलेको नेपालले ४ मा जित र २ मा हार बेहोर्न पुग्यो ।
विश्वकप लिग–२ मा नेपालले अमेरिका र ओमानलाई एक एक खेलमा पराजित गर्दा एक एक खेलमा जित निकाल्न सफल भयो । नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग दुई ओडिआई सिरिज खेलेको थियो । पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई दुई विकेट र दोस्रो खेलमा १ सय ५१ रनले पराजित गर्यो । अमेरिकालाई पहिलो खेलमा ५ विकेटले पराजित गरेको थियो । दोस्रो खेलमा नेपाल ओमानसँग ५ विकेटलेनै पराजित हुन पुग्यो । तेस्रो खेलमा अमेरिकाले ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । अन्तिम खेलमा ओमानलाई नेपालले ७ विकेटले हराउँदै सुखद अन्त्य गर्यो ।
युवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको पूनरागमन, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको फर्किदो लय र युवा ओपनरको सानदार प्रभाव सकरात्मक पक्षका रुपमा रहे । नेपालले ओमान भ्रमणमा सर्वाधिक रन पपुवा न्युगिनीविरुद्ध २ सय ३३ रन बनायो भने सबैभन्दा कम लक्ष्य पछ्याउँदा ओमानविरुद्ध १ सय २२ रन रह्यो । विशेषगरि ओमान भ्रमणमा नेपालले सम्भावना, आशा र क्षमता अनुसारको प्रदर्शन भने गर्न सकेन । नेपालको आशा र अपेक्षा यो भन्दा धेरै थियो ।
मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरले प्रतियोगिता मुखमै राजीनामा दिँदा खेलाडीको मनोबलमा असर पुग्यो । अर्कोतर्फ ओमानको उच्च तापक्रममा खेल्न खेलाडीलाई केहि कठिनाई रह्यो । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहे । ओमान भ्रमणबाट नेपालले आगमी दिनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि ती समस्या र कमजोरीबाट राम्रो पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ । ओमान भ्रमणमा नेपाली टोलीमा देखिएका पाँच समस्या यस प्रकार रहे ।
५. दबाबमा साझेदारीको कमी
ओमानमा नेपालको ब्याटिङ कमजोर देखिनुमा साझेदारीको अभाव एक मुख्य कारण हो । साझेदारी बिनाकुनैपनि टोलीले ठूलो योगफल बनाउन सक्दैन । नेपालले ओमान ६ ओडिआई खेल खेल्दा सर्वाधिक ठूलो साझेदारी ९५ रनको रह्यो । उक्त साझेदारी आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्रले ओमानले प्रस्तुत गरेको १ सय २२ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याउँदा दोस्रो विकेटका लागि थियो ।
दोस्रो ठूलो साझेदारी ज्ञानेन्द्र र रोहितले तेस्रो विकेटका लागि पिएनजीविरुद्ध दोस्रो खेलमा तेस्रो विकेटका लागि ८९ रन थियो । त्यहि साझेदारीको कारण ओमानमा नेपालले सर्वाधिक ठूलो २ सय ३३ रन बनाएको थियो । एक ब्याट्सम्यान चल्दा अर्कोले राम्रो साथ दिन सकेनन् । जसको कारण ठूलो साझेदारी बन्न सकेन । पिएनजीसँग रोहितले ८६ रनको इनिङ खेल्दा अर्को एण्डबाट साथ पाउन सकेनन् ।
अमेरिकासँग दोस्रो खेलमा कुशल भुर्तेलको ८४ रन र रोहितको अविजित ६२ रनको सहयोगले नेपालले २ सय ३१ रनको विजयी लक्ष्य पूरा गरेको थियो । उक्त खेलमा विनोद र रोहितले पाँचौ विकेटका लागि ८३ रनको साझेदारी गर्दा जित सम्भव बनेको थियो । ओमानविरुद्ध आसिफले ९० रनको इनिङ खेल्दा अर्को तर्फबाट साथ नपाउँदा नेपाल १ सय ९६ रनमा समेटिएको थियो । त्यसैले नेपालले बलियो योगफल बनाउन ठूला साझेदारीमा ध्यानदिन आवश्यक छ । यो नेपाली क्रिकेटको नयाँ समस्या भने होईन ।
४. तीव्र गतिका बलरको कमजोर प्रर्दशन
ओमानमा नेपाली तीव्र गतिका बलरको प्रदर्शन कमजोर रह्यो । ओमान भ्रमणमा नेपालले कुल पाँच मध्य चार तीव्र गतिका बलर खेलाएको थियो । अभिनाश बोहरा सबै खेलमा बेन्चमा बसे । चार तीव्र गतिका बलरले कुल ८२.१ ओभर बलिङ गर्दै ४ सय ७८ रन खर्चेर १५ विकेट लिए । जवकी स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एक्लैले ६ खेलमा ४१.५ ओभरमा १ सय ३३ रन खर्चेर १८ विकेट लिँदै उच्च प्रदर्शन गरेका थिए ।
सोमपाल कामीले ६ खेलमा ३५ ओभर बलिङ गर्दै १ सय ८५ रन खर्चेर २ विकेट मात्र लिन सके । त्रिकोणात्मक सिरिजका चारै खेलमा विकेट लिन सकेनन् । गुलशन झाले डेब्यू खेलमा ३ ओभरमा ३१ रन खर्चेर विकेट लिन सकेनन् । विक्रम सोबले ४ खेलमा १७.१ ओभरमा ९५ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । करणले ५ खेलमा २७ ओभर बलिङ गर्दै १ सय ६७ रन खर्चेर ८ विकेट लिए । जसमा अन्तिम खेलमा ओमानविरुद्ध चार विकेट थियो । तीव्र गतिका बलरको कमजोर प्रदर्शन गम्भीररुपमा सोच्न आवश्यक छ ।
ओमानको अल अमरेत मैदान तीव्र गतिका बलरलाई बढी सहयोगी मानिन्छ । प्रशिक्षक ह्वाटमोरले पनि प्रतियोगिताअघि तीव्र गतिका बलरबाट धेरै आशा रहेको बताएका थिए । सहयोगी पिचमै तीव्र गतिका बलर नचल्नु पक्कै नेपाली क्रिकेटको लागि राम्रो संकेत भने होईन । बलर आफैंले गहन रुपमा सोच्दै सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । आगामी सिरिजमा पनि तीव्र गतिका बलरको प्रदर्शन यस्तै खराब रहेमा नेपालको जित कठिन देखिन्छ ।
३. ब्याकअप स्पिनरको कमी
एक समय नेपाली टोलीको प्लेइङ–११ मा चार स्पिनर हुने गर्दथे । अहिले खुम्चिएर दुईमा झरेको छ । सन्दीपमा नेपाली बलिङ धेरै निर्भर रहँदै आएको छ । तर सन्दीप नचले वा खेल्न नसक्ने भएमा नेपाल संकटमा पर्न सक्छ । ओमानसँगको पहिलो खेलमा सन्दीप पेटको समस्या कारण खेल्न सकेनन् । त्यसको भरपूर फाइदा उठाउँदै ओमानले सहज जित निकालेको थियो । जसमा सुरुवाती १० ओभरमै १ सय ८ रन जोडेको थियो ।
स्पिनर सुशान भारीको प्रर्दशन कमजोर रह्यो । भारीले ५ खेलमा ४ विकेट लिए । स्पिनरमा भारीले राम्रो गरेपनि नगरेपनि नेपालसँग विकल्प थिएन । तीव्र गतिका बलरले कमजोर गर्दा स्पिनर विकल्प थप्ने विकल्प पनि थिएन । व्याकअप स्पिनरमा नराख्नु ठूलो समस्या हो । सन्दीप ओमानसँगको खेलमा जस्तै अन्यमा अप्रत्याशित रुपमा खेल्न नसक्ने अवस्था आएको भए नेपाल ठूलो समस्यामा पर्ने निश्चित थियो ।
२. मध्यक्रम र तल्लोक्रम कमजोर ब्याटिङ
नेपालको ओमान भ्रमणमा मध्यक्रम र तल्लोक्रम ब्याटिङ निकै कमजोर रहँदा ब्याटिङमा सोचे अनुसार योगफल बन्न सकेन । सर्वाधिक रन रोहितले बनाए । रोहितले ६ खेलमा २ अर्धशतक सहित कुल २ सय १७ रन बनाए । दोस्रो स्थानमा रहेका ज्ञानेन्द्रले ६ खेलमा २ अर्धशतक सहित कुल १ सय ९६ रन बनाए । समान खेलमा आसिफ शेख १ सय ८९ रन र कुशल भुर्तेल १ सय ४४ रन बनाए । सर्वाधिक रन बनाउनेमा यी शीर्ष चारका ब्याट्सम्यान रहे ।
अन्य ११ खेलाडीले कुल २ सय ७३ रन बनाउन सके । करणले ४ इनिङमा ७६ र विनोदले समान इनिङमा ७० रन बनाए । सोमपाल कामीले ४२, गुलशन झा २८, सन्दीप लामिछाने २७ रन बनाए । अन्यको प्रदर्शन सम्झनलायक छैन । नेपालको ब्याटिङ कमजोर बन्नु र ठूलो योगफल बन्न नसक्नुमा मध्यक्रम र तल्लोक्रमका ब्याट्सम्यानको खराब प्रदर्शन मुख्य कारण थियो । विशाल योगफल बनाउन राम्रो सुरुवात मात्र भएर हुँदैन मध्यक्रम र अन्त्य पनि त्यतिनै उत्कृष्ट हुनुपर्छ । मध्यक्रम र तल्लोक्रम समस्या समाधानको लागि नेपालले समयमै सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
१. खराब सट छनोट र गैर जिम्मेवार ब्याटिङ
गैर जिम्मेवारी ब्याटिङ र खराब सटले नेपाली टोलीलाई पुन निराश बनायो । क्षमतामा कुनै कमी छैन । तर मैदानमा खेलाडीमा जिम्मेवारी लिएर खेल्न भने सकेका छैनन् । ओमान भ्रमणमा केहि खेलाडीमा मात्र जिम्मेवारी प्रदर्शन देख्न सकिन्थ्यो । विपक्षीको उत्कृष्ट बलिङ आक्रामणले भन्दा पनि खराब सट छनोट गर्दै आफ्नै कारणले बढी विकेट दिएका थिए । रन त्यसै बन्दैन ।
त्यसकौ लागि सहि सट छनोट, जिम्मेवारी ब्याटिङ, धैर्यता, परिस्थीति र पिच अवस्थालाई हेर्दै रन जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालले ब्याटिङमा सुधार गर्ने हो भने पहिला जिम्मेवारी र सहि सट छनोट बढी ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा नेपाली ब्याटिङ सुधार हुन कठिन पर्न सक्छ ।